ဘယျလိုပုံစံနဲ့ လုပျသကျ ၂၅ နှဈအထကျ ဝနျထမျးတှကေို ကားတငျသှငျးခှငျ့ပေးမှာလဲ - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ဘယျလိုပုံစံနဲ့ လုပျသကျ ၂၅ နှဈအထကျ ဝနျထမျးတှကေို ကားတငျသှငျးခှငျ့ပေးမှာလဲ
လုပ်သက် ၂၅ နှစ်အထက်ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ကားတင်သွင်းခွင့်ပေးရန် စီစဉ်နေဆိုပြီး သတင်းတွေတက်လာတာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုတွေပေးသွင်းမှာလဲ ….
စလစ်ကပ်အတွက် - ၂၀၁၇ - ၂၀၂၀ (YGN Liscense)
Brand New - ၂၀၁၈ - ၂၀၂၀
အားလုံးဘယ်မောင်းချည်းပါပဲ။ အနိမ့်ဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၇မော်ဒယ်ဆိုရင်တောင် သိန်း ၅၀၀ အောက်မဆင်းချင် ပါဘူး။ ဒီတော့ တင်သွင်းခွင့်ရလာပြီပဲထားဦး။ ငွေမလိုက်နိုင်မှာတော့ ဘာလုပ်မှာလဲ ….။ ရောင်းစားရမှာလားပေါ့။
ညာမောင်းပေးမယ်ဆိုတာကလည်း ကောလဟာလသာသာပဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုံလို့မရပါဘူး။ နောက်ပြီးမူဝါဒကို ချိုးဖောက်သလိုဖြစ်နေလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ မတိုင်ခင်တုန်းကတော့ ဟုတ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့နောက်ပိုင်း အသက်ကန့်သတ်ချက် ပြည့်သူ၊ မည်သူမဆိုဖြစ်လာလို့ မှတ်ပုံတင်ငှားခတွေတောင် ပေါ်လာခဲ့တာမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကား တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်ပေးမယ်ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ဆုံးပါ။
ကားတစ်စီးတင်သွင်းမယ်ဆိုရင် ၁။ အကောက်ခွန်
၄။ ကညန မှတ်ပုံတင်ခ
၅။ ၀င်ငွေခွန် ဆိုတာတွေကို ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၀င်ငွေခွန်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး အများကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျန်တာ ၄ ခုပဲရှိပါတော့တယ်။ ကျန်တာတော်တော်များများကလည်း အင်ဂျင်ပါဝါနဲ့ အမှန်တကယ်ဝယ်ယူတဲ့ဈေးနှုန်းကို မူတည်ပြီးကောက်ခံတာ ဖြစ်လို့ အင်ဂျင်ပါဝါကြီးကြီးဝယ်မှ အခွန်လျှော့တာကိုများများစားစားခံစားရမှာလားဆိုတာပါ။
လုပျသကျ ၂၅ နှဈအထကျရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှကေို ကားတငျသှငျးခှငျ့ပေးရနျ စီစဉျနဆေိုပွီး သတငျးတှတေကျလာတာနဲ့ ပကျသတျပွီး ဘာပဲဖွဈဖွဈဝမျးသာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုတှပေေးသှငျးမှာလဲ ….
စလဈကပျအတှကျ - ၂၀၁၇ - ၂၀၂၀ (YGN Liscense)
အားလုံးဘယျမောငျးခညျြးပါပဲ။ အနိမျ့ဆုံးမျောဒယျဖွဈတဲ့ ၂၀၁၇မျောဒယျဆိုရငျတောငျ သိနျး ၅၀၀ အောကျမဆငျးခငျြ ပါဘူး။ ဒီတော့ တငျသှငျးခှငျ့ရလာပွီပဲထားဦး။ ငှမေလိုကျနိုငျမှာတော့ ဘာလုပျမှာလဲ ….။ ရောငျးစားရမှာလားပေါ့။
ညာမောငျးပေးမယျဆိုတာကလညျး ကောလဟာလသာသာပဲရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယုံလို့မရပါဘူး။ နောကျပွီးမူဝါဒကို ခြိုးဖောကျသလိုဖွဈနလေို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ မတိုငျခငျတုနျးကတော့ ဟုတျတယျလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့နောကျပိုငျး အသကျကနျ့သတျခကျြ ပွညျ့သူ၊ မညျသူမဆိုဖွဈလာလို့ မှတျပုံတငျငှားခတှတေောငျ ပျေါလာခဲ့တာမှတျမိကွမယျထငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကား တငျသှငျးခှငျ့ပါမဈပေးမယျဆိုတာကတော့ မဖွဈနိုငျဆုံးပါ။
ကားတဈစီးတငျသှငျးမယျဆိုရငျ ၁။ အကောကျခှနျ
၄။ ကညန မှတျပုံတငျခ
၅။ ဝငျငှခှေနျ ဆိုတာတှကေို ပေးဆောငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ဝငျငှခှေနျတော့ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုပွီး အမြားကသုံးသပျပွောဆိုထားပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ကနျြတာ ၄ ခုပဲရှိပါတော့တယျ။ ကနျြတာတျောတျောမြားမြားကလညျး အငျဂငျြပါဝါနဲ့ အမှနျတကယျဝယျယူတဲ့ဈေးနှုနျးကို မူတညျပွီးကောကျခံတာ ဖွဈလို့ အငျဂငျြပါဝါကွီးကွီးဝယျမှ အခှနျလြှော့တာကိုမြားမြားစားစားခံစားရမှာလားဆိုတာပါ။
25 year experience staff